XXX Xubinta taranka ragga ee u qaabaysan ururinta bong| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → XXX Dumarka guska oo qaabeeya ururinta bong
Gabar, Gus, iyo Dick
Saddex eray oo badan ninka 2aad ee ugu fiican saaxiibkiis. Sidoo kale saddexda magac ee ugu caansan bongs qaabeeya sida xubinta taranka ragga. Bokiga, dick bong iyo guska bong ayaa ah caarada magacyada badan. Mid ka mid ah magacyada carrabka ka roga waa songlong bong, mise waa qalad in bong uu iska rogo carrabka sidii Dong bong oo kale?
Si kastaba ha ahaatee, fiiri xubnaha bongs-ka ee u eg qoyska guska ee aan hayno oo soo iibso oo soo iibso bong-bubble-bong-qaab leh oo xoog leh